फिल्मको लगानी महंगिनुमा कलाकार कती दोषी ? – An Online Entertainment News Portal
HomeNewsFeature Newsफिल्मको लगानी महंगिनुमा कलाकार कती दोषी ?
सुत्र इन्टरटेन्मेन्ट- अहिले दर्शकले नाम सुनेका कलाकारले माग्ने पारिश्रमिकको बारेमा जोकोही जानकार छन् । २० देखि ५० लाखसम्मको पारिश्रमिक कलाकारले माग्ने गरेको कुरा स्पष्ट छ ।
तर, के सामान्य चलेका कलाकारले पनि यस्तै पारिश्रमिक डिमाण्ड गर्छन् त ? अहिले सिनेमा निर्माण गर्नेहरुको गुनासो छ कि, कलाकार महंगो हूँदा सिनेमा निर्माण गर्न नै सकिएन ?
केही बर्ष अघिसम्म ७० लाखमा नेपाली सिनेमा नै बन्ने गर्थे । तर, अहिले यो लगानी कलाकारका लागि मात्र गर्नुपर्ने अवस्था छ । अब, अरु काम सकेर सिनेमा हलसम्म ल्याउँदा के होला ? २ करोड त सामान्य रुपमा नै छुन्छ ।
सिनेमा क्षेत्र चलेमा, निर्माताले लगानी गर्न सकेको खण्डमा मात्र सिनेमा क्षेत्र रहने हो । तर, यो क्षेत्रमा कोही पनि बच्नेवाला छैन । यसैले यो क्षेत्र जोगाउने जिम्मा सबैको हो या होइन ?
यदि हो भने कलाकार किन अनावश्यक रुपमा महंगो भएका ? केही बर्ष पैसा कमाउँ, त्यसपछि जे होला होला भन्ने सोचले कलाकारिता गरेर पनि हुन्छ ?
सिनेमा बनाउनेहरुको गुनासो छ, अहिले त सामान्य कलाकारको रेट पनि छुन नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । ८–१० लाख त जस्ता कलाकारले पनि मागिदिन्छन् । अनी सिनेमा बनाउने कसरी ?
हुन पनि हो, अहिले कलाकारको पारिश्रमिक सुनेर सिनेमा बनाउने आँट जोकोहीले गरिहाल्दैन । किनकी, महंगो रकम माग्ने कलाकारको नामबाट दर्शक हलमा आएका छैनन् । तर, पारिश्रमिक उनीहरुको नै चर्को ।
एकजना निर्देशकले सिनेमा बनाउने तयारी गरेको तर कलाकारको पारिश्रमिक चर्को भएकाले काम गर्न नसकेको गुनासो गरे । उनका अनुसार, सामान्य कलाकारले पनि महंगो रकम मागिदिन्छन् । यसले गर्दा सिनेमामा कलाकारको बजेट नै ७० लाखसम्म पुग्न थालेको छ । अझै, स्टार कलाकार लिएको खण्डमा त पारिश्रमिक अझै बढेको छ ।
अहिले नेपाली सिनेमाको अवस्था धराशायी छ । युटुबमा चलेको आधारमा सिनेमा हलमा चल्दैन । हलमा चल्नका लागि धेरै कुराले फरक पार्नुपर्छ । तर, कलाकारको अर्थहिन डिमाण्डले सिनेमा क्षेत्रलाई नै मर्कामा पारेको छ । अब पनि कलाकारले पारिश्रमिकको बारेमा नसोच्ने हो भने निर्माताले लगानी नै गर्न सक्दैनन् ।
कि त सिनेमामा चर्को पारिश्रमिक लिएपछि त्यसलाई रिटर्न गर्ने सामथ्र्य राख्नुपर्छ । होइन भने चर्को पारिश्रमिक मागेर निर्माताको ढाड सेक्न पाइदैन । कलाकारले यो बिषयमा बुझ्न जरुरी छ ।
‘हेल्लो जिन्दगी’को शुभ मुहुर्त सम्पन्न
February 14, 2019 Tulasa Karki Celebrity, Feature News, Gossip, Kollywood, News 0